Halcyon စျေး - အွန်လိုင်း HAL ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Halcyon (HAL)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Halcyon (HAL) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Halcyon ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
HAL – Halcyon
Market ကဦးထုပ်: $64 919.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Halcyon တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Halcyon များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
HalcyonHAL သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0306HalcyonHAL သို့ ယူရိုEUR€0.0259HalcyonHAL သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0233HalcyonHAL သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0279HalcyonHAL သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.275HalcyonHAL သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.193HalcyonHAL သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.679HalcyonHAL သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.114HalcyonHAL သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0407HalcyonHAL သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0424HalcyonHAL သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.685HalcyonHAL သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.238HalcyonHAL သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.164HalcyonHAL သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.3HalcyonHAL သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.5.17HalcyonHAL သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.042HalcyonHAL သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.046HalcyonHAL သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.954HalcyonHAL သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.213HalcyonHAL သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.23HalcyonHAL သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩36.33HalcyonHAL သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦11.66HalcyonHAL သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.25HalcyonHAL သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.849
HalcyonHAL သို့ BitcoinBTC0.000003 HalcyonHAL သို့ EthereumETH0.00008 HalcyonHAL သို့ LitecoinLTC0.000509 HalcyonHAL သို့ DigitalCashDASH0.000294 HalcyonHAL သို့ MoneroXMR0.000325 HalcyonHAL သို့ NxtNXT2.19 HalcyonHAL သို့ Ethereum ClassicETC0.00425 HalcyonHAL သို့ DogecoinDOGE8.35 HalcyonHAL သို့ ZCashZEC0.000303 HalcyonHAL သို့ BitsharesBTS1.17 HalcyonHAL သို့ DigiByteDGB1.13 HalcyonHAL သို့ RippleXRP0.0998 HalcyonHAL သို့ BitcoinDarkBTCD0.00103 HalcyonHAL သို့ PeerCoinPPC0.107 HalcyonHAL သို့ CraigsCoinCRAIG13.63 HalcyonHAL သို့ BitstakeXBS1.28 HalcyonHAL သို့ PayCoinXPY0.522 HalcyonHAL သို့ ProsperCoinPRC3.75 HalcyonHAL သို့ YbCoinYBC0.00002 HalcyonHAL သို့ DarkKushDANK9.59 HalcyonHAL သို့ GiveCoinGIVE64.74 HalcyonHAL သို့ KoboCoinKOBO6.68 HalcyonHAL သို့ DarkTokenDT0.0282 HalcyonHAL သို့ CETUS CoinCETI86.33